China 409 409L oyi akpọrepu anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Manufacture na Factory | Huaxiao
409 igwe anaghị agba nchara na-agbakwunye Ti ọdịnaya ka e jiri ya tụnyere igwe anaghị agba nchara, nke ka mma na ịgbado ọkụ arụmọrụ na processability. A na-ejikarị ya eme ihe na ọkpọkọ ikpochapu ụgbọala, ihe nkedo, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ na ngwaahịa ndị ọzọ na-achọghị ọgwụgwọ okpomọkụ mgbe ịgbado ọkụ. 409L nwere obere carbon karịa 409 igwe anaghị agba nchara ma dị elu na nkwụsị corrosion na weldability.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 409 409L oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara, 409 409L CRC
Obosara: 100mm - 2000mm
Ogologo: 500mm - 6000mm
Pallet ibu: 25MT
409 Yiri ọkwa si ọkwa mba dị iche iche
409 Chemical akụrụngwa:
C：≤0.08 ，Na ：≤Ogbe Mn ：≤Ogbe ， S ：.0.03 ，P ：≤0.045, Uhie ：10,5～11.7 ，Ni ：0,5 Max，
Ngwongwo Ngwongwo 409:
Ike ọdụdọ:> 380 Mpa
Ogologo (%):> 20%
Isi ike: <HRB88
Ekuku Angle: ogo 180
409L Otu ọkwa si na mba dị iche iche
409L Chemical Component:
C：≤0.03 ，Na ：≤Ogbe Mn ：≤Ogbe ， S ：.0.03 ，P ：≤0.045, Uhie ：10,5～11.7 ，Ni ：0,5 Max，
Ngwongwo Ngwongwo 409L:
Nkọwa banyere nkịtị akwa akwa akwa
Igwe anaghị agba nchara anaghị ebute nchara, olulu, nchara ma ọ bụ eyi. Igwe anaghị agba nchara bụkwa otu n’ime ihe ndị kachasị sie ike n’ịrụ igwe. N'ihi na igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo corrosion eguzogide, ọ na-enyere nhazi usoro aka na-adịgide adịgide na-enwe injinia ike n'ezi ihe. Igwe anaghị agba nchara nke nwere Chromium na-ejikọkwa ike igwe yana oke mgbatị, na-eme ka ọ dị mfe igwe akụkụ iji gboo mkpa ndị na-ese ụlọ na ndị nrụpụta usoro.
Ngwa banyere igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
Ọtụtụ n'ime ihe ndị achọrọ maka iji mee ka ọdịdị ụlọ ahụ dịrị ogologo oge. Mgbe ị na-ekpebi ụdị igwe anaghị agba nchara ga-eji, ihe ndị bụ isi bụ ụkpụrụ ịchọ mma achọrọ, ọdịdị mmebi nke ọnọdụ ọnọdụ, na usoro nhicha a ga-eji. Agbanyeghị, ọtụtụ ngwa na-achọ naanị iguzosi ike n'ezi ihe ma ọ bụ enweghị mgbochi mmiri. Dịka ọmụmaatụ, elu ụlọ na mgbidi dị n'akụkụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ime ngwa ndị a, ọnụahịa ụlọ onye nwe ya nwere ike ịdị mkpa karịa aesthetics, na elu adịghị ọcha. Ojiji nke igwe anaghị agba nchara 304 na gburugburu ụlọ na-arụ ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, n'ime ime obodo na obodo iji nọgide na-apụta n'èzí, ọ dị mkpa ka a kpochaa ha ugboro ugboro. N’ebe a na-emetọ emetọ na mpaghara ndị dị n’akụkụ mmiri, elu ya nwere ike ịdị ọcha ma dịkwa nchara. Otú ọ dị, iji nweta mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi, achọrọ nchara nwere nickel. Ya mere, a na-eji igwe anaghị agba nchara 304 mee ihe na mgbidi ákwà mgbochi, mgbidi n'akụkụ, elu ụlọ na ihe owuwu ndị ọzọ, mana na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ikuku mmiri, a na-ahọrọ igwe anaghị agba nchara 316. Enwere uru nke iji igwe anaghị agba nchara na nhazi ngwa ka amata nke ọma. Enwere otutu ntuziaka imepụta gụnyere 304 na 316 igwe anaghị agba nchara. Ebe ọ bụ na igwe anaghị agba nchara "duplex" 2205 nwere ezigbo nguzogide ikuku na ikuku na oke ike na ike na-agbanwe, nchara a ka etinyekwara na ntuziaka ndị Europe. N'ezie, a na-arụ igwe anaghị agba nchara n'ụdị ọla na nha zuru oke, nwekwaa ọtụtụ ụdị pụrụ iche. A na-ejikarị mpempe akwụkwọ na nchara ígwè emepụta ngwaahịa ndị a na-ejikarị eme ihe, a na-emepụta ngwaahịa ndị pụrụ iche site na ọkara na mbadamba dị arọ, dịka ọmụmaatụ, igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ihe eji emepụta ihe. Enwekwara gburugburu, elliptical, square, rectangular na hexagonal welded ma ọ bụ enweghị nkebi tubes nchara na ụdị ndị ọzọ nke ngwaahịa, gụnyere profaịlụ, Ogwe, wires na ihe nkedo.
Nke gara aga: 316L316 Cold Rolled Stainless Steel sheets (0.2mm-8mm)
Osote: 410 410s oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ
Igwe anaghị agba nchara Cold Rolled Sheet